हजुरबाको कथा | Nagarik News - Nepal Republic Media
रामेश्वर राउत मातृदास
गाउँको वरिपरि हरियाली जङ्गल थियो। जहाँ रूख हुन्छ त्यहीँ सुख हुन्छ भन्ने मान्छेमा दिल चेतना जागिरहेको थियो। हिमालहरू सधैं उत्साह बाकेर मुस्कुराइरहेका हुन्थे। गर्विलो र दर्बिलो आत्मविश्वासले अग्लिएका हँसिलो मुहारझैं वशिष्ठधामका मान्छेहरू पनि जोशिला र जाँगरिला थिए।
शुद्ध र सङ्लो पानी छचल्किँदै घट्टे खोलो र सिन्धु खोलो कलकलाउँदै अविरल बगिरहन्थे। सङ्लो पानीमा सलबलाउँदै खेलिरहेका माछालाई देखेर सानासाना बालबालिकाहरूको फूलजस्तो कोमल मन फुरुङ्ङ पर्थे। जङ्गलका पक्षीहरूले बोलेको मीठो बोली र कोकिल कण्ठले गाएको मधुर गीत सुनेर मान्छेको मन त्यसैत्यसै पुलकित भैरहन्थ्यो। भनौं त बाहिरको विषालु हावापानी र वातावरणले वशिष्ठधामको रमणीय परिवेशलाई बिथोल्न पाएको थिएन। आफ्नो थातथलोप्रति सबैलाई प्रगाढ विश्वास र प्रेम थियो।
असल मान्छेलाई इज्जत गर्ने र सानालाई प्रोत्साहन गर्ने अनुकरणीय सामाजिक संस्कार र संस्कृतिले गर्दा त्यहाँका मान्छेहरू सभ्य र शान्त थिए।हजुरबा–हजुरआमाहरू आफूले सुनेका मीठामीठा कथाहरू सुनाएर आफ्नो वरिपरि आएका बालबालिकालाई दङ्ङ पार्थे। विद्यालयबाट फर्किदा बाटामा फेला परेका ऐंसेलु, काफल र बयर टिपेर नातिनातिनीहरू आफ्ना हजुरबाहजुरआमालाई ल्याइदिन्थे। नातिनातिनीहरूले आफ्ना अग्रजहरूलाई गरेका प्रेम देखेर आमाबुबा पनि औधी प्रफुल्ल हुन्थे।
वशिष्ठधामको सामाजिक जीवन खोलाको सङ्लो पानी जस्तै पवित्र थियो। सबैमा अर्काले सित्तैं दिएको एक दाना पनि त्यसै खान हुँदैन भन्ने सोचाइ थियो।हरेक मान्छेहरू आफ्नै बुद्धि र क्षमताको कमाइमा रमाउँथे। दसैं,तिहार, माघेसङ्क्रान्ति, तीज, गाईजात्रा, फागु लगायतका चाडपर्वहरूमा औधी रमाइलो हुन्थ्यो। मठमन्दिरमा पूजापर्व मनाउन जाँदा ट्याम्को, दमाहा, झ्याली, झ्याम्टा, नर्सिङ्गा, तुरही, नगरा, शहनाई आदि बाजाहरू घन्किन्थे र सबैको मनमा उत्साहको लहर तरङ्गित हुन्थ्यो।
गौरी गाई, लाहुरी भैंसी गोठका गोठ हुन्थे। झाले, माले, तिल्के, तारे, रागेपाटे गोरु फाँट थर्काउँदै डुक्रन्थे र सिँगौरी खेल्थे। हरेक दिन ढुङ्ग्रा भरिभरि दूध दोहिन्थे। बालबालिकाहरू डम्फे कचौराभरि तातो र स्वादिलो दूध खाएर फुर्तिला, जोशिला र जाँगरिला थिए।
सबैमा आफ्नो मातृभूमिमाथि अगाध आस्था, विश्वास र प्रेम थियो। जो जहाँ गए पनि स्वदेशको माया बोकेर जान्थे र नयाँ ज्ञान, विद्या, बुद्धि र सीप सिकेर आफ्नै देश फर्किन्थे। बुझ्यौ त नातिनातिना हो कथा ? बुझ्दै छौ। सुन्यौ त वशिष्ठधामको कथा ? सुन्दै छौँ हजुरबा ! कस्तो लागिरहेको छ त तिमीहरूलाई यो कथा ? सबैले एकैस्वरमा मीठो र स्वादिलो लाग्यो भने ! कस्तो मीठो र स्वादिलो लाग्यो ? पाकेको आँप र स्याउजस्तै मीठो र रसिलो लागिरहेको छ हजुरबबा ! केटाकेटीहरू रमाउँदै उफ्रिन थाले।
प्यारा नातिनातिना हो, म भनेको डाँडामाथिको जूनघाम ! तिमीहरू भनेका यो देश र समाजका आशावरी धुन हौ आशावरी धुन!अझै भनुँ त ? भोलिको देश हाँक्ने शक्ति भनेका तिमीहरू हौ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार, डाक्टर, इन्जिनियर, कवि, लेखक, साहित्यकार, वकिल, न्यायाधिश आदि शक्ति भनेकै तिमीहरू नातिनातिनाहरू नै हौ ! तिमीहरू नभए को हुन्छ त यो देशमा को ? लौ भन त !
हुन त हो हजुरबा तर मलाई त... ! हैन के तर मलाई त ...भन्छ यो गौराङ्ग ! के तर मलाई त...? के तँलाई आफ्नो देश मन पर्दैन ? हामी बुढा भाका हजुरबाहजुरआमाको माया लाग्दैन तँलाई ? कथा भन्दाभन्दै हजुरबा कड्किनुभयो !
लाग्छ नि, आफ्ना प्यारा हजुरबाहजुरआमाको माया किन नलाग्नु ! मलाई त सबैको माया लाग्छ। ई... हजुरबा, मैले भन्न खोजेको चाहिँ यही हो ! बुझ्नु भो त मेरो कुरा ?
गौराङ्गले आफ्नो हातमा भएको ग्लोब (पृथ्वीको नक्सा) सबैलाई देखाउँदै भन्यो, ‘यो सिङ्गै पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो। यसलाई हामी सबैले माया गर्नुपर्छ।’ सिङ्गै पृथ्वीलाई हामी सबैले प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म, हो कि हैन त हजुरबा ? गौराङ्गका कुराले वरिपरि कथा सुन्न बसेका सबै जना छक्क पर्दै मुखामुख गर्न थाले।
‘खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने, बाउभन्दा छोरा जान्ने भनेको यही हो बाबु हो ! मेरो मन आज फूलको पुतली जस्तै खुसी भएको छ। साना आँखाले सिङ्गै पृथ्वी देख्न सक्नु ! साँच्चै हो, हाम्रो घर, हामी सबैकी आमा पृथ्वी र नेपाल आमाको जय ! नेपाल आमाको जय ! सुन्नेलाई सुनका माला, भन्नेलाई फूलका माला ! लौ बाबुनानी हो, खाना खाओ, विद्यालय जाओ ! अर्को मीठो कथा सोचेर म फेरि नातिनातिनाहरूलाई सुनाऊँला र जीवन र जगत्को अर्थ बताऊँला।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७६ १०:४० शनिबार